Iyo Apple Watch Series 3 LTE ichasvika muSweden, Denmark neIndia mwedzi unouya | Ndinobva mac
MunaGunyana wegore rapfuura Apple yakaunza iyo Apple Yekuteedzana Series 3 LTE kumusika. Uku kuvhurwa kwakaitwa nenzira yekudzedzereka (nenzira yekare) asi zvakanyanya zvekuti munyika zhinji hatisati tave nenhau yekusvika kwayo.
Asi nhasi zvakangowanikwa kubudikidza nekuziviswa naApple pachako kuti Sweden, Denmark neIndia ndivo vachatevera kuti wachi iwanikwe. Zvese zvinoratidza kuti pre-kutenga kweApple smart wachi ichave ichiwanikwa kubva svondo rinouya, kunyanya neChishanu, Chivabvu 4 uye ichatanga kutumira musi wa11 wemwedzi mumwe chete.
Chinhu chinonakidza pamusoro peichi chishandiso kuzvitonga kuzere uko kunotendera mushandisi uye kusiya iyo iPhone kumba haisisiri dambudziko neiyi Series 3 LTE. Sekutsanangura kwaakaita muzuva rake Jeff Williams, Mutungamiriri Anoshanda weApple:
Isu tinotenda kuti kuwedzerwa kweakasanganiswa nharembozha kuchachinja zvachose mashandisiro aunoita Apple Watch yako nekugadzira pfungwa nyowani yerusununguko nekukubvumidza kuti ugare wakabatana ne uye usina iyo iPhone. Iyo Apple Watch Series 3, inosanganiswa nesimba rewatchOS 4, ndicho chigadzirwa chakanakira hupenyu hune hutano.
Tichiri kuSpain isu tichiri kure
Zvingave zvinonakidza chaizvo kuva nesarudzo yekutenga wachi iyi munyika medu uye inongowanikwa chete munyika dzekutanga musi waGunyana 22: United States, Australia, Canada, China, France, Germany, Japan, Puerto Rico, Switzerland , uye United Kingdom. Pasina kupokana inofanirwa kunge iri nyaya yevanoshanda uye ndeyekuti munyika medu yakavakidzana, France, vanacho chinowanikwa neOrange uye Orange inoshanda muSpain, saka zvinoita sezvisina kunaka kwatiri kuti haiwanikwe nhasi. Apple inogona kuisa iyo Series 3 LTE wachi mune dzimwe nyika munguva pfupi, asi chaizvo kuwedzera kwayo kuri kunonoka zvakanyanya kupfuura izvo vashandisi vanozvida.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch Series 3 LTE iri kuuya kuSweden, Denmark neIndia mwedzi unouya
Unogona kuisa Apple nhevedzano 3 ne lte kwaunoziva, vakatora nguva yakareba, saka hazvisi zvevatengi.
Xiaomi's Aqara zvigadzirwa zvichawedzera HomeKit gore rino
Iyo Palo Alto Apple Chitoro ichagamuchira zvakare kugadzirisa